Ugaarsiga doofaar-duureedka oo soo batay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Matthias Schrader/Scanpix
Ugaarsiga doofaar-duureedka oo soo batay
La daabacay onsdag 17 juli 2013 kl 11.09
Intii lagu gudajirey sannadkii hore waxay dad iswiidhish ahi ugaasadeen doofaar-duureed tiradiisu laba goor ka badan tahay tiradii caadi ahaan la ugaarsan jirey. Ururka ugaarsata iswiidhishkuna waxay rjeynayaan in ugaarsigaasi uu wax ka dhimo tirada doofaar-duureedka oo sanooyinka dambe dalka ku soo badaneysa.
Caalin cilmiga bayoolojiga oo lagu magacaabo Johan Truvé kana shaqeeya hay’ad qaabbilsan duurjoogta ayaa aamminsan in ugaarsiga soo batay uu natiijo keenay, laakiin aan weli gaarin heerkii la doonayey in la gaarsiiyo tirada doofaar-duureedka:
- Taranka doofaar-duureedku uma badnaan doono sannadkaan sidii uu ahaan jirey, laakiin waxaan qabaa in uu joogi doono heerkii uu tirada doofaar-duureedku ahaa sannadkii 2012. Taranka doofaar-duureedku wuxuu ugu badnaa sanadihii 2011-2012.
Iswiidhen kama jiro hab lagu tiriyo doofaar-duureedka, laakiin waxaa lagu qiyaasaa hadba tirada ku dhimata shilalka gaadiidka ee waddootinka ka dhaca. Marka la eego tirada shilalka ku dhimata waxaa laga dhadhansan karaa in ugaarsigu saameyn u yeeshay kororka tirada doofaar-duureedka.